We Fight We Win. -- " More than Media ": မုံရွာလူထု ဒေါ်စုကို ရှီခိုးကြို
မုံရွာလူထု ဒေါ်စုကို ရှီခိုးကြို
မုံရွာမြို့သူ မြိုသားများ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒူးတုတ်ရှီခိုးကြိုဆိုနေပုံကို စိတ်မကောင်းစွာ တွေ့ မြင်ရပုံဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်သမားတွေ လုပ်ခတိုးရရေး ဆန္ဒပြပွဲမှာ….
ပြည်သူတွေ လျှပ်စစ်မီးမှန်မှန်ရရှိရေး ဆန္ဒပြပွဲမှာ….
သြော်… နော်အုန်းလှ၊ ကျော်ကိုကို
အဖိုးမထိုက်တော့တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်ပါတကား။(Aung Naing Moe)
အန်တီလုပ်တာ အန်တီတာဝန်ယူတယ်။ အန်တီမှားရင်အန်တီခံမယ်.Daw Su....အပြောင်းအလဲလိုချင်ရင် မိမိဘာသာ အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစား”Daw Su but please vote me.
We need to find find out who control this behind.